KENYA: Madaxii Sirdoonka Al-shabaab ayaan Dilnay – Radio Daljir
KENYA: Madaxii Sirdoonka Al-shabaab ayaan Dilnay
Febraayo 18, 2016 9:35 b 0
Bosaaso, Febru, 18, 2016 -(Daljir)_ Wasaaradda Gaashaandhiga ee dalka Kenya ayaa faahfaahin ka bixisay duqeyn diyaaradeed oo ay sheegeen inay ku dileen Madaxii Sirdoonka Alshabaab, Mahad Karatey iyo Saraakiil kale.
Sida lagu soo daabacay Wargeyska The Star waxay Taliska Milliteriga Kenya sheegeen in ay Mahad Karatey ku dileen duqeyn maalintii Isniinta ee la soo dhaafay ka dhacday Xeradda Tababarka Alshabaab ee Nadaris oo ku taalla inta u dhexeysa Degmooyinka Bu’aale iyo Saakow ee Gobalka J/dhexe.
Hadalka ka soo baxay Wasaaradda Gaashaandhigga Kenya waxaa lagu xusay in Mahad Karatey lagu dilay, xilli uu ku soo jeday Xeradaasi oo uu Tababar ugu soo xiri lahaa 80 dagaalyahan oo ka tirsan Waaxda Amniyaadka Alshabaab, kuwaasi oo dhamaystay Tababar, waa sida uu Wargeyska The Star qoray.
“Waxaa la xaqiijiyey in 42 ka mid ah Alshabaabka tababarka loo soo xiray lagu dilay inta u dhexeysay Saakow iyo Bu’aale, halka kuwo bandanna dhaawacmeen” ayaa lagu yiri hadalka ka soo baxay Wasaaradda Gaashaandhigga Kenya.
Waxaana intaasi lagu daray inay Milliteriga Kenya rumeysan yihiin inuu Mahad Karatey door muhiim ah ka qaatay Weerarkii bishii hore ee Janaayo 15-dii lagu qaaday Xeradda Ceel-cadde oo lagu dilay Askar badan oo Kenyan ah.
Alshabaab waxay sheegeen inay Weerarkii Ceel-cadde ku dileen 100 ka tirsanaa Askarta Kenya, halka kuwa kalena ay nolol ku qabteen.
Weerarkii Ceel-cadde ayaa waxaa Askarta Kenya ka soo gaaray khasaarihii ugu xumaa ee ay la kulmeen tan iyo markii ay Somalia soo galeen bishii October ee sannadkii 2011-kii.
Dowladda Puntland oo Shacabka ugu baaqday in ay Roob-doon isugu soo baxaan
DHAGAYSO:Qaybtii Labaad ee Marti-soor oo uu Marti-ku yahay Cali Khaliif Galaydh